Semalt waxay kugula talineysaa adeegsiga Xogta qaabaysan ee Tayada leh si aad uhesho Xarumo Dheeraad ah
Bishii Sebtembar ee 2019, Google ayaa sii deysay qayb ka mid ah mashiinkeeda raadinta ee ku takhasusay barnaamijyada xogta. Waxay ina siineysaa laba shay: ilo cad oo xog muhiim ah loogu talagalay kuwa doonaya inay xoojinayaan sheegashadooda iyo taatikada kale ee ku habboon kobcinta mashiinka raadinta. Wax kasta oo bartilmaameedkaagu noqon karo, waxaan kuu heynaa xal adiga.
Waa maxay Xogta qaabaysan?
Xogta qaabaysan waa qaab uu Google doorbido marka uu raadinayo xogaha. Qaabka ururinta dataset-ka ayaa ku yaal schema.org , halkaas oo aad uga dhex bixi karto liis-gareeyaha hab-dhismeedka si aad u hesho qaab dataset ah oo ku habboon noocaaga. Haddii ay tani u muuqato mid xad dhaaf ah, waxaan gadaal u faahfaahin doonnaa faahfaahinno dheeraad ah. Marka hore, hoosta waa liistada ereybixinta aan adeegsan doonno.
Qorshaha - Nooca guryaha ee isbeddelaya iyadoo kuxiran mowduuca laga wada hadlay.
Kuwaas waxaa ka mid ah hawo mareynno, howlo hal abuur, alaabo, iyo meelo
Xog uruurinta - Macluumaadka la xidhiidha qorsheha.
Hawlaha hal-abuurka leh waxay lahaan doonaan qoraa, tifatire, iyo wax la taaban karo.
Microdata - Tani waa calaamadaha loo adeegsado HTML si loogu sharxo nooca macluumaadka.
“Qoraaga” laftiisa waa sumad suurta gal ah
Calaamadeynta - Markaad microdata-ka u adeegsato xogtaada
ITEMSCOPE - Astaanta HTML-ka ee loogu talagalay adeegsiga qorshe
ITEMTYPE - Astaanta HTML ee qeexeysa nooca qorsheynta
Shayga nooca = "http://schema.org/book"
ITEMPROP - Astaanta HTML ee qeexida hantida shayga.
Itemprop = ”qoraa”
Haddii aadan waxba ka aqoon HTML, faham in saddexda qeexitaan ee ugu dambeeya ay ku jiraan koodhka. Badanaa waad arki doontaa markii aad ka fiirsaneyso xog uruurin iyo qorsheyaal. Uma baahnid inaad fahanto HTML si aad u fahanto qoraalkan.
Haddii aad fahanto HTML, waxaad arki doontaa kuwan aasaasiga u ah ka dhigashada qorshe-dhismeedka koodhkaaga. Schemas waxay kuu oggolaaneysaa inaad abaabusho waxyaabahaaga si ay u aqoonsadaan matoorada raadinta Google sidii xog ururinta. Codsigan qorsheysan wuxuu u keenayaa taraafikada boggaaga haddii si sax ah wax looga qabto.
Sideen U Isticmaalaa Xogtaan Xogta Websaydhadeyda?
Waxaan kusoo laaban doonnaa gelitaanka macluumaadkaaga oo ah xog uruurin xilli dambe barta dhexdeeda. Marka hore, waxaan u nimid inaan u isticmaalno matoor raadintaan sidii kheyraad aad adiga ugu adeegsan karto websaydhkaaga. Way fududahay in dib loo soo celiyo xogta horey u jirtay intii la abuuri lahaa xog gaar ah.
Goorma Ayay Tahay In Aan Ka Walwalo Xuquuqda Qoraalka
Haddii aad xasuusato maalmihii koleejyadaada, tixraaca ilahaaga waxay fure u ahayd isticmaalka xogta si kor loogu qaado qodobbadaada. Marka ay timaado soosaarista nuxurka, inta badan xeerar isku mid ah ayaa la adeegsan doonaa ilaa iyo intaad iyaga siiso sumcadda. Tusaale ahaan, kuu sheegi kari waayey inaan qorey sheeko asal ah oo si shaki leh looga yaqaan sawir-qaadista sheekada 'IT' ee uu qoray Steven King.
Raadinta Google Dataset waxaa ka mid ah astaamo raadin oo ku xaddideysa adeegsiga ganacsiga iyo isticmaal aan ganacsi ahayn. Haddii hadafkaagu yahay inaad qorto blog ku xiran sumad si aad wax u iibiso, qaybtani adiga ayaa muhiim kuu ah. Haddii aadan hubin, xor u tahay inaad la xiriirto blogger la xiriira ama shirkad. Way ka mahadcelinayaan soo galitaankaaga, waxayna kuu furi kartaa fursad kale oo kuu furma.
Maxaan Ka Raadin Karaa Xogta Google?
Waxa ay tahay inaad raadiso waxay ku xirnaan doontaa sidaad u dhaqmo. Aynu nidhaahno waxaad isku deyeysaa inaad wax uun ka dhigto Maamulayaasha aan faa'ido doonka ahayn. Waxaad u maleyn kartaa in lacag aad u badan la siiyo. Marka waxaad raadineysaa shaqo samafal oo leh natiijooyin yar. Laakiin ka faa’iideysiga “mowduuca aragtida” ayaa kaa caawineysa yareynta. Faahfaahinta ayaa ku jirta sawirka hoose.
Aynu dhahno inaad rabto miis ay ku jiraan liiska sadaqooyinka samafalka ee ka shaqeeya Boqortooyada Midowday. Waxaad sidoo kale u kala saari kartaa xogta qaab ahaan. Xaaladdan oo kale, waxaad dooranaysaa ikhtiyaarka qaabka oo aad doorataa “miis.” Midkan, gaar ahaan ka taxaddar adeegsiga halka ay tani khusayso.
Ma jiraan Kheyraad Kale Markii La Adeegsanayo Raadinta Macluumaadka Google?
Dadka isha ku haya baloogga Google ayaa ah sida ugu dhakhsaha badan gelitaanka macluumaadka. Waxaad sidoo kale raaci kartaa bogga 'Semalt' , kaasoo isha ku hayn doona sida ay tani wax uga beddeleyso muuqaalka SEO. Google sidoo kale waxay leedahay Wax Weynaansho .
In kasta oo Google ay ku soo kordhisay walax xiiso leh muuqaalka mashiinka raadinta, hadafka Semalt ayaa weli ah inuu kaa dhigo kan ugu sarreeya muuqaalka muuqaalkan. Qaybta xigta, waxaan ka dhex mari doonnaa sida aad ugu adeegsan karto xogtaada macluumaadka mashiinka raadinta. Adeegsiga xogtan qaabaysan ayaa fursad cusub u ah kuwa doonaya inay kordhiyaan aragooda oo ay helaan raadad badan.
Sida loo calaamadeeyo Boggaga Macluumaadka
Si loo fududeeyo waxyaabaha, waxaan soo bandhigi doonnaa hanaan-ka-tallaabo tallaabo ee kaa caawinaya calaamadinta calaamadaha bogaggaaga macluumaadka. Waxaan sidoo kale ku siin doonnaa dhowr ilo oo kaa caawin doona jidkaaga. Hoos waxaa ku yaal liis faahfaahin ka bixinaya waxa aan ka gudbi doonno.
Qeex mawduucaaga (nidaamka).
Ka digtoonow waxa u qalma xog-ururinta.
Cilmi baarista laxiriirta iyo xogta gaarka ah.
Soosaar HTML loo baahan yahay.
Qeexidda qorshehaaga waa tallaabada ugu horreysa ee soo saaridda xog kasta oo la diyaariyo. Liiska Schemas wuxuu ku yaal schema.org. Hal qorshe ayaa ku jiri kara hal bog. Markaa uma adeegsan doontid bog hore mashruuc, waxaad ku lug lahaan doontaa oo keliya baloog blog ah.
Tan darteed, waxaan u adeegsan doonnaa gole deegaan. Markaad sameysid xoogaa cilmi baaris ah websaydhka, waxaad go’aansatay inaad jeclaan lahayd inaad ku meelayso sidii qof deegaan ahaan ah liiskaaga macluumaadka. Tusaale ahaan, aynu sheegno in aad shaqaalaysiiso qof kuu soo ururinaya macluumaadka ku saabsan qiimaha hilibka lo'da ee magaaladaada. Markaad sameysid cilmi baarista, waxaad awoodi doontaa inaad u adeegsato xog uruurintaan dadka arintan ka raadinaya deegaankaaga.
Sidee Tani I Caawisaa?
Dadaalkani wuxuu kordhin doonaa taraafikada websaydhka wuxuuna siinayaa websaydhka kobcinta macluumaad il aamin ah. Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa macluumaadkan xayeysiiska mustaqbalka. Waad dhihi kartaa inaad haysato jilicsan hilibka lo'da marka loo barbar dhigo 100ka dhismo ee ku xiga magaaladaada. Hubso inaad xushmeyso kuwa kale habka loo adeegsanaayo macluumaadkan.
Ka digtoonow waxa uqalma sidii xog uruur
Sida ugufiican ee qofku ku helikaro waxa uqalma inuu yahay xog uruurinta waa iyadoo la raadsado. Waxqabadka Google ee FAQ sidoo kale waxay leedahay tusaalooyin dhowr ah , laakiin waxaan dooneynaa inaan ku sii ballaarino liistada. Hal tusaale oo aan rabo inaan diirada saaro waa “waxkasta oo u muuqda xog uruurinta.” Qalabka raadinta Google waa mid aad u awood badan ilaa iyo inta aad xamili karto xog-uruurinta.
Qaadashada tusaalaheedii hore, waxaan u kala saari karnaa “qiimaha hilibka lo'da ugu wanaagsan ee magaalada” oo aan soo saarnay oo aan u adeegsan karnaa miis heer sare ah, miis shabakad dhisan, a .pdf, a .xml, a .docx, iyo a qaar kale oo yar oo ay aqrin karaan google's AI. Xitaa waad isticmaali kartaa muuqaal ku habboon. Garaafyada garaafka iyo garaafyada xariijimaha waxaa labadaba si fudud gacanta ugu haya Excel.
Diiwaannada macluumaadka ayaa ka mahadcelinaya macluumaadka si nadiif ah oo xirfad leh ku yimaada. Haddii websaydhkaaga uu ugu habboon yahay inuu soo saaro miis noocaan ah iyo xog uruurinta, Google waxay u adeegsan doontaa macluumaadkaas inay ku xoojiso baaritaanka baarista. Sidoo kale, booqdayaashu waxay yeelan karaan habab waxbarasho oo kala duwan. Soo saarista waxyaabo bilaash ah qaabab badan oo warbaahin ayaa ka caawin doona akhristaha inuu fahmo qodobkaaga.
Baadhista Xogta U gaarka ah iyo Xogta La Xiriira
Furaha SEO iyo xog uruurinta waxay soosaarayaan shay u gaar ah oo daboolaya ereyada furaha ah ee qaas ah. Isla sidaas oo kale ayaa loo adeegsadaa markay tahay xagga qorsheynta iyo xog-ururinta. Adoo abuuraya wax qaab qaabaysan ah leh, waxay u sahlaysaa akhristayaasha inay wax cunaan. Xogta gaarka ahi waa waxa iyaga ku hayn doona.
Dukaankii hilibka lagu qalo, waxaa laga yaabaa inuu ku soo waco agagaarka ama u tago laba websaydh si uu u bixiyo xogta. Xogtu waxay u baahan tahay in la cabbiro oo la buuxiyo. Xaaladdan oo kale, way fududahay inaad fiiriso oo aad u yeeriso sidii loogu baahnaa. Haddii aad raadinayso fikradaha dadku ka qabaan meheraddaada, waxaad siisaa qiyaas hal illaa shan ah. Waxaad sidoo kale adeegsan kartaa dib u eegista dadweynaha Google, laakiin xogta had iyo jeer ma ahan wax sahlan in la ururiyo.
Macluumaadkaani wuxuu kaa caawinayaa buuxinta macluumaadkaaga. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka kale waxaa ka mid ah hagaajinta ganacsiga iyo wacyiga arrimaha. Haddii aad fuliso dib u eegista, kaliya si aad u ogaato inaad ka maqantahay aag, waxay fursad u tahay horumar. Waxaa laga yaabaa inaad ubaahantahay inaad bedesho mowduucaaga hadaad rabto inaad buuxiso xog uruurin.
Soosaar HTML Baahan
Soosaarista HTML waa geedi socod farsamo ahaan ku lug leh waqti badanna qaadan kara. Rasaasta aan kor ku soo sheegnay ayaa loo badinayaa inay jahwareer ku jiraan haddii aadan khibrad u lahayn HTML ama luqadda barnaamijyada. Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan laheyd inaad shaqaaleysiiso xirfado cusub oo kaa caawiya.
Xikmad sidan oo kale ah waxay ku socotaa bogagga internetka ee xorta ah. Tusaalooyinka caanka ah ee tan waxaa ka mid noqon kara Toptal, Upwork, iyo Freelancer.com. Isku day inaad hesho qof waayo aragnimo u leh duurka ka hor. Hadeysan horay u calaamadeynin macluumaad uruurin, ma ogaan karaan waxay sameynayaan. Hadday ogyihiin waxay samaynayaan, dib u eeg qorshahaaga ITEMPROPs ee bartilmaameedkaaga si aad dib ugu eegto HTML aqoon ahaan.
Dad badan oo iskood u shaqeystayaal ah ayaa sidoo kale shirkad cusub u keeni doona aragti cusub. Hubso inaad ku dhejiso aragtida shirkaddaada. Intaa waxaa sii dheer, iskood u shaqeystayaasha ayaa laga yaabaa inay khafiifiyaan SEO-gaaga. Hubso inaad la tashato Semalt haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan waxa aan kugula talineyno ku saabsan codsashada xog ururinta websaydhkaaga.
Ma Heshaa Diiwaan Gelinta Xogta ee Maqaalkayga?
Jawaabta su'aashani waxay kuxirantahay hadafkaaga guud. Abuuritaanka degel, ama baloog, ku saleysan xirmooyin wargelin iyo qodobo ay ku jiraan xog uruurin gaar ah waxay qaadataa shaqo badan. Ganacsiyada yar yar waxaa laga yaabaa inay ku afjaraan maalgashi weyn heshiisyadooda. Heerka waqtiga, dadaalka, iyo lacagta ay qaadan karto waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah.
Si kastaba ha noqotee, abuuritaanka saldhig macluumaad oo ku saabsan meheraddaada oo leh xiriir joogto ah boggaaga ayaa fure u ah istiraatiijiyad adag oo blog ah. U adeegsiga macluumaadkan sidii xog uruurinta waxay kordhisaa kalsoonidaada. Raadinta Xogta Google ayaa sii kordheysay heerka guurinta ee dhowr daraasadood oo cilmi baaris ah taas darteed. Ku dhejinta qodobkaaga waxani waxay ku siinaysaa kor u qaad deg deg ah.
Daraasad Dacwad Ooga Mashiinka Xogta Google
Waxaa laga yaabaa inaad u maleynaysid in tan loo dhisay si ka wanaagsan kooxaha waxbarasho iyo websaydhyada ku saleysan tirakoobka. Si kastaba ha noqotee, shirkad Jabaaniis ah oo la yiraahdo Rakuten ayaa adeeggan u adeegsan jirtay si ay kor ugu qaaddo Rakuten Recipies. Adeegsiga xogta qaabaysan waxay kordhisay taraafikada websaydhkooda 270 boqolkiiba.
Istaraatiijiyadani had iyo jeer uma horseedayso dib u helida naftaada mashiinka raadinta xogta. Mararka qaar waxay kuu horseedaa inaad ka mid noqoto waxyaabaha la soo bandhigay. Xaraashka muuqaalka leh ayaa ah waxyaabo aan si faahfaahsan ugala hadli doonno bayaan kale.
Sidee Xogta La Dhisiyey Ay Igu Caawin Doontaa Ina Ugu Horeeyo Google?
Shirkadaha badankood, xogta qaabeysan ayaa ah qaab lagu wanaajiyo SEO-gaaga iyadoo la adeegsanayo xog uruurinta iyo qaabab horey u jiray. Kuwa kale ee baari kara tiro badan oo xog ah, waa fursad. Markaad sameyso cilmi baaris iyo inaad ka warqabtid sida shabakadaada ugu habboon tahay shabakadan, waxaad naftaada siineysaa fursadda ugu fiican. Wadahadal lala yeesho Semalt, waxaan arki doonnaa haddii websaydhkaagu uu ku habboon yahay in loo isticmaalo tan si loo helo Google ugu sareeya.